२१ असोज, काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु भएकामध्ये २९.६ प्रतिशत ५० वर्ष मुनिका छन् । मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या ६ सय ६३ पुगेको हो । त्यसमध्ये १६९ जना ५० वर्ष मुनिका छन् । त्यसमा पनि ४० देखि ४५ वर्षसम्मका धेरै छन् । मृत्यु हुनेमा ७० प्रतिहत ५० वर्षमाथिका छन् ।
ननागरिक दैनिकमा प्रकाशित पवित्रा सुनुवारको समाचारमा नेपालमा ५० वर्ष मुनिकाको मृत्यु संख्या विकसित देशको तुलनामा बढी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘कारणबारे थप अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने । ‘कम उमेर छ भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, रोगसित लड्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरामा भरपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा युवा उमेरका मानिसको कोभिड–१९ ले हुने मृत्यु विकसित देशको तुलनामा बढी रहेको विज्ञहरुले जनाएका छ्न । विकसित देशको तुलनामा ७० वर्षमाथिका वृद्धहरुको संख्या कम हुनु र बढी मात्रा युवा समुहमा नै कोरोना संक्रमण हुनुले ५० वर्ष मुनिका व्यक्तिको मृत्यु बढी भएको उनीहरुको तर्क छ । कम उमेरका भए पनि उनीहरु कुनै न दीर्घ रोगबाट प्रभावित भएकाले यो उमेरमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हुन सक्ने राष्ट्रिय इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीको विश्लेषण छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
विप्लवको विद्यार्थी संगठनका जिल्ला अध्यक्षसहित ५ पक्राउ
सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा जानुपर्छ : अध्यक्ष केसी
सरकारले तोक्यो कर तिर्ने मिति, असार २५ गतेसम्मको समय
तुइन काटिएपछि व्यासमा खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन
फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
बजार अनुगमन प्रभावकारीरुपमा गर्न सांसदहरुको माग